Doodii Ronaldo vs Messi Oo La Soo Afjaray – Xiddigihii Ka Soo Garab Ciyaaray Labada Nin Oo Codeeyay & Hal Nin Oo Ay Guusha Ugu Shubeen – Laacibnet.net
Doodii Ronaldo vs Messi Oo La Soo Afjaray – Xiddigihii Ka Soo Garab Ciyaaray Labada Nin Oo Codeeyay & Hal Nin Oo Ay Guusha Ugu Shubeen
August 6, 2020 Balaleti
Cristiano Ronaldo ama Lionel Messi?
In ka badan toban sannadood ayay taageerayaasha kubada ka doodayeen xiddiga fiican labadooda.
Haatan in ka badan sidii hore ayaa looga doodaa baraha bulshada xiddiga fiican Ronaldo iyo Messi.
Labaduba waxay ku soo riyaaqeen waayahooda ciyaareed iyagoo ku soo guuleystay koobab badan, waxay soo dhaliyeen boqolaal goolal iyagoo sidoo kale ku soo guuleystay abaalmarino badan oo shaqsiyadeed.
Macquul ma ahan in taageerayaasha kubada cagta ay isku raacaan xiddigii abid ugu fiicnaa kubada cagta Ronaldo ama Messi, laakiin waxaa fekerkooda la qaadan karaa xiddigihii labadaan nin ka soo garab ciyaaray ee nasiibka u yeeshay inay garoon la galaan labadoodaba.
Waxaan halkaan hoose idiin kugu soo gudbineynaa 12ka xiddig ee ka garab ciyaaray Messi iyo Ronaldo iyo xiddiga ay aaminsan yihiin inuu fiican yahay.
Paulo Dybala waxay haatan Juventus isla joogaan Cristiano Ronaldo halka ay Messi saaxiibo ku yihiin xulka qaranka Argentina. Markii la weydiiyay xiddiga fiican labadooda wuxuu uga jawaabay si diblumaasiyadeed.
“Ma ahan suurtogal in la isbarbardhigo labadooda ama la yiraahdo midkaas ayaa fiican.
“Labadoodaba waxay ka sareeyaan xiddigaha kale ee kubada cagta, waxayna sidaasi soo ahaayeen muddo sannado ah”
Deco waxay xulka Portugal u soo wada ciyaareen Cristiano Ronaldo halka uu Lionel Messi ka garab ciyaaray markii uu joogay Barcelona.
Laakiin markii la weydiiyay xiddiga fiican labadooda, Deco wuxuu doortay inuusan midkoodna magacaabin isagoo ka doorbiday saaxiibkiisii Barcelona Ronaldinho.
Deco ayaa yiri: “Marka banaanka laga soo eego Leo iyo Cristiano ayaa ah kuwa ugu fiican abid.
“Gaar ahaan wacdarihii ay dhigayeen sannado badan iyagoo heer sareeya ku ciyaaraya, laakiin shaqsiga sida weyn ii soo jiitay wuxuu ahaa Ronaldinho”
Xiddiga PSG Angel di Maria waxay Ronaldo ku soo wada ciyaareen Real Madrid iyagoo isla qaaday koobkii Champions League ee 2014, halka ay Messi saaxiibo ku yihiin xulka Argentina.
Markii la weydiiyay xiddiga fiican labadooda, Di Maria wuxuu doortay Messi isagoo yiri: “Riyo ayay aheyd inaan la ciyaaro Rooney, Ibrahimovic, Cristiano iyo Leo…
“Leo ayaa ah midka ugu fiican afartooda.
“Dhamaan ciyaartoyda waa weyn ee aan ka soo garab ciyaaray, waa ay adag tahay in la kala doorto laakiin haddii aan mid dooranayo waxan dooran lahaa Leo.
“Messi ayaa ah xiddiga ugu fiican dunida, taasi su’aal kama taagna.
“Marka aan duqoobo waxaan caruurta awoowaha u ahay u sheegi doonaan inaan ku soo guuleystay Champions League, iyo rajadeeda ah inaan Koob Adduun ku guuleysto…
“Laakiin waxaa sidoo kale u sheegi doonaan in awoowahood uu ka garab ciyaari jiray Lionel Messi.”
Daafaca bidix ee Argentina waxay Ronaldo isla joogeen Manchester United halka Messi ay isku xul ahaayeen.
Heinze oo ka hadlayay labadooda sannadkii 2008 ayaa yiri: “Haddii aan dooranayo hal ciyaaryahan waxaan dooran lahaa Ronaldo.”
Haatan waxay Juventus isla joogaa Ronaldo ka dib markii ay sidoo kale iskula soo ciyaaren Real Madrid, halka Messi ay isku xul yihiin, Higuain labada nin si fiican ayuu u garanayaa.
Markii dhawaan la weydiiyay xiddiga fiican Ronaldo iyo Messi, Higuain ayaa si diblumaasiyadeed u hadlay isagoo amaanay labada xiddig islamarkaana ka gaabsaday inuu magacaabo midka fiican.
Xiddig kale oo ay Ronaldo Real Madrid ku soo wada ciyaareen islamarkaana Messi ay isku xul ahaayeen, Gago shaki uguma jiro xiddiga fiican labadooda.
Gago ayaa yiri: “Ani ahaan Ronaldo No.1 iima ahan, waxaa xiddiga aduunka ugu fiican ah Messi sababtoo ah qaabka uu u ciyaaro, sida uu kubada u dhaqaajiyo iyo sida uu ciyaaraha u bedelo.”
Xiddig kale oo Los Blancos ay saaxiibo ku ahaayeen Ronaldo islamarkaana ay Messi isku xul ahaayeen, Garay ayaa doortay Lionel Messi.
Garay ayaa yiri: “Marka ay dadku i weydiiyaan xiddiga ugu fiican abid, waxaan iraahdaa Leo.”
Xiddiga khadka dhexe ee Everton wuxuu labo sannadood Barcelona kula soo ciyaaray Messi halka uu kabtankiisa xulka Portugal uu yahay Ronaldo.
Gomes ayaa isna si diblumaasiyadeed u hadlay isagoo diiday inuu xusho xiddiga fiican labadaan nin ee uu ka soo garab dheelay, wuxuu mid walba ku amaanay awoodiisa kubadeed, laakiin waa uu isgarab dhigay.
Xiddiga reer Sweden waxa uu Champions League la qaaday Messi bilowgii waayihii ciyaareed ee xiddiga reer Argentina halka uu 13 kulan ka garab ciyaaray Ronaldo markii uu amaah ku joogay Old Trafford.
Laakiin Larsson ayaa garanaya xiddiga uu dooran lahaa isagoo yiri: “Cristiano nasiibdarro ayay ku tahay inuu garoomada ku jiro waqti uu joogo Messi.
“Ronaldo waa ciyaaryahan aad u fiican laakiin Messi ayaa ka sii fiican”
Daafaca reer Spain waxay Man United isla joogeen Cristiano Ronaldo halka uu muddo dheer ka garab ciyaarayay Lionel Messi.
Markii la weydiiyay inuu kala doorto labada xiddig, wuxuu yiri: “Cristiano Ronaldo waa mashiin aad u fiican, waa nin shaqo adag kaasoo mar walba doonaya inuu horumar sameeyo.
“Waxaan mar walba iraahdaa in Messi uu leeyahay tayo aysan cid kale laheyn.
“Aniga ahaan Messi bani’aadam ilama ahan, laakiin Ronaldo isagaa ugu fiican bani’aadamka”
Wuxuu labo jeer oo isku xigta horyaalka La Liga la qaaday Barcelona halka uu Portugal kula guuleystay UEFA Nations League, Semedo wuxuu guulo kula riyaaqay Messi iyo Ronaldo.
Wuxuu yiri: “Real Madrid waa ay dareentay maqnaanshhaa Ronaldo wax badan. Ma dhihi karo Barcelona kuma faa’idin bixitaanka Cristiano. Haddii uu joogi lahaa waa ay nagu adkaan laheyd ku guuleysiga koobabka horyaalka.
“Messi waa xiddig cajiib ah, waa ii nasiib inaan ka garab ciyaarayo, mar walba waa uu iga yaabiyaa, wuxuu ka yimid duni kale.”
Semedo ayaa diiday inuu si cad u doorto xiddiga fiican labadaan nin sidaasi darteed natiijada waa barbaro.
Man United ayay isla joogeen Ronaldo halka ay Argentina u wada ciyaareen Messi.
Tevez ayaa dooda labada xiddig ka yiri: “Cristiano Ronaldo waa nin ku waalan inuu noqdo qofka ugu fiican wax walba. Messi wuxuu ciyaaraa isboorti kale. Inuu seddex gool dhaliyo kulan walba wax caadi ah ayay la tahay”
Sida Semedo, Tevez wuxuu u janjeeraa dhanka Messi laakiin wuu diiday inuu si cad u doorto xiddiga fiican labadaan nin.
Sidaasi darteed waa kuma guuleystaha?
Lix barbaro ayaa ka soo baxday 12kii xiddig ee ka garab ciyaaray labadaan nin kuwaasoo aan hubin midka fiican labadooda ama diiday inay xumeeyaan mid ka mid ah labada xiddig.
Laakiin lix ciyaaryahan ayaa si jawaab cad bixiyay. SHAN waxay dooratay Messi halka hal ciyaaryahan uu doortay Ronaldo.
Ciyartoda dhamaantooda waa Argentina marka wax kle ii keen
Shaafka warsame says:
Aadbaa idin salaamaa Bahda laacib Run-ahantii waxaa la yaab ah Adinka oo ah boga kaliya aan ciyaaraha Kala socono in aay Qibradiina intaan la ekaato ciyartoyda aad soo qaadateen in Ka badan ayaa Ka hadlay 2 ciyaarayahan lkn waxaad duur-xul Ku sameeseen inta aay Messi isku wadan ama isku Naadi yihiin dhamaan ciyaartoda Portugal waa dhax-dhaxaad lkn Argentina dhamaantood waa Messi kkkkkkkkk kubada cagta halyeeyo ayey leedahay Geesigoodana waaa Ronaldo
Waa arrin fiican in wax la qiimeeyo.
Laakiin sidaan wax laguma qiimeyn karo. Waayo Qof kasta waxa uu xushmeynayaa qofka uu markaas ka garab ciyaarayo iyo qofka ay isku Waddan yihiin oo wax kama sheegi karo haddii laga fiican yahay hal nin maahee (G. Heinze). Qof labadooda mid ka mid ah agtiisa ku soo guul darreystay haduu mid kale u tago oo kula guuleysto Champions League wuxuu leeyahay key isla guuleysteen ayaa fiican, Qiimeyntuna saas maaha.
isku qaab ciyaar xataa maaha Messi iyo Ronaldo Qofba si gaar ah ayuu u ciyaaraa. maxaa lagu qiimeeyay ma guulaha kooxeed, midda shaqsiyadeed.
Waxaa fiicnaan laheyd in Messi uu Koox aan Barcelona aheyn tago si loo qiimeeyo sidee wax uga beddelay kooxdaas. Maradona waagiisi Napoli oo dhulka jiifata ayuu ka qaaday horyaalna la qaaday kooxihii waaweynaana meel saaray.
Hadda waxaan Portogal iyo Argentine aheyn oo qiimeyntan ku jira waa labo nin: Pique (Spain) iyo Larson (Sweden) kan hore haddey isku koox yihiin Messi lama qiimeyn karo, Kan labaad Messi 3 dhibcood ku sii. Gabriel Heize oo ku waddan ah Messi hadduu dhahay Ronaldo waa in 3 dhibcood lagu siiyaa Ronaldo. Ma jiro qof Portugal ah oo yiri Messi.
Waxaan ku soo gabagabeyn lahaa ha lagu qiimeeyo qof walba daqiiqadaha uu dheelay iyo guulihiisa, kadibna boqolley ha lagu saleeyo.
Ani ahaan waxaan ku raaxeystaa qaab ciyaareedka Messi
Bal adigu Caqligee cir iyo dhul aad ku tartan siin kartaa
Ishaa inoo macalin ah
Axmed shaafi sh mahad says:
Shiki la aan ronaldo iyo messi waa mucjisoyinka kubada cagta somaray kuwooda
Ugu fcn lkn waxaan qaba ronaldo waa kan fcn labadooda ♥♥♥♥
Zhaafic zhaalo says:
Haddii aynu eegno halyeeyadii kubada cagta soo marey iyo kuwan hada jooga waxey ukala qaadeen lapa hab messi inuu ka yimid duni kale ronaldona uu dadaal wado ama ku gaadhey markaa walaalkey ronaldo fican leh ma waxaad naga dhaadhicin nin dadaalay ayaa ka fiican nin duni kale ka yimid caqligu ha shaqeeyo
hadii aynu messi iyo ronaldo aynu ka sheekaynano maaha inaad ku faanto koobab ayuu kooxo la qaadey lkn garo inay doodu tahay lapo shqsi haddii aad leedahy koobab ayuu kooxo la qaadey artuto vidal ispa uu la qaadey kooxo badan markaa pro shaqsiyada hadaynu ka hadleyno waa messi
Messi mucjiso kubada cagta soo martey
Ronaldo ciyaartoy kubada cagta soo maarey
Jawaapta waad hayzataa ila tahay
markaa caqligu ha shaqeeyo yeynaan isku odhan uun ii noo qira in ninkan leo kubada uu la seexdo😄😄😀😀
Leo andeas messi cocitiano
Ani ahan waxan tagera Ronaldo waxan tageri jiray marku jogay manchester united iyo waliba real madrid. Messi matageero lain xaqiiqda aya waxay tahay messi inuu ka ficanyahay inta uu doono ronaldo
Kalita waxaan ka hadli oo qudha guulaha shaqsiyadeed messi ma si cadaalad ah ayuu ku helay mise musuq iyo eex waad ogaydeen ceebtii iyo fadeexadii fifa ku dhacday
Markuu ninka dhan ee madaxwaynaha ka ahaa fifa sefplater uu lahaa cr7 ciyaartoy cubada cagta ah in uu noqdo kuma haboo a ee waxaa loogu talagalay inuu ciidan noqdo o uu salaanta saaro ma cadaalad ayaa jirtay
Marnaba lama qiimaynkaro
Cr7 si the player in the world
Fikirkaagu waa argantiniyaysa yahay Qoraalkaaga qeexay ma dheeli tira
Inaa Bahda webka qalad Dushanbe uga tuurtaan ma aha kuwa ka hadlay waa wada Argentina ama ma aha Ibta jeer ee ay xiddig adduun kukala guuleysteen ayaaba loo jeedaa. Anigoonanan u ahayn midna taageere.
Cabdi risaaq ilyaas says:
Laacib sidii la idiin mooday iyo sidaad ka tihiin qiimeynta waa 2 kala duwan waxaa qurxooneed inaad soo qortaan anagaa messi taageernay kaliya sababto ah ciyaartoyda aad soo xulateen kuwooda ugu macquulsan waaba dhacdhaxaad kuwa kalana waaba isku wadan ayey kafiiriyeen ee ciyaar yahanka waxaa lagu qiimeeyaan saameentiisa naadiga uu jooga iyo xulkaba run ahaan messi waa laacib wanaagsan lkn magaari karo Ronaldo waayo cr7 marwalbo waa kan muujinkara tayadiisa meel walbo uu joogo waana no 1 cr 7 sidaan qabo
war hedHe wlhi waad is daalinaysan waxaad arkaysaan somaali ciYaraHa bartay 2018 raba inuu kala saaro mess I io Ronald waa layaab aaan aarkaY waxaa inoo kala saari waYeY kuwi gaaalda ee ay kubadaba sameyey mrkaa sudebad idinku ikala dorn kartan messi or Ronald
جمال نيمار says:
anigu waxaan ahay tagero real o wlhiya hadana messi io Ronald waxaan kadHaHo garan maaYo sbabto aY tahay mawaxaynu eegna shakhsiyan mise guulaha ay gadheen 1 hadi shakhsiyan la eegayo messi waa mucjiso hibo kubadeed ayu leYaHaY wu kaayabinayaa
hadi guulo la eegayana Ronald isaga wuu cadeestaY inu yahay player wax dheer ciyaartoyda kale meel dhow ka firiYa ronaldo real wxu uqabtaY waynu ognahay juv iyana waynu ognahay Portugal hadlkeda daa messi dee isana waynu ognahay only Barcelona keliYa 😑
Abdisammad haybe says:
Laacib warkiina waa iska cadyahay anagana caruur maad noo malaysiin!!!!
Argentine ciyaatoogeedii oo la waraysto maa noqotay wax kagu kala saaro ronaldo iyo messi waayahay ee anaguna waxaan soo dhigaynaa suaalihii laga waydiiyay pepe,quaresma,figo,nani ka waraka sidaas
Kkkkkk wixiina waa waali cas ama daahir yaa shamis macnaha sheekadiina looma cumaamadin
kkkkkkkkk cajiib ma waxaa saad maantana lasoo shirtagteen ?
ciyaar yahanada la wareesanayo waa wada argentin
teeda kale inta kalana waa isku naadi marka qiimeentaas siday caqliga saliim ka ah ku qaadan hadii messi cr7 lakala saarayo ma sidanbay ku kala baxayaan ani fikirkayga labadan nin waxa kala saari kara ciyaar yahanada kale oo koox iyo qaran midna aysan wadaagin waayo raga ka garab ciyaaraya waxaa ooga aqoon badan kuwa daawanaya ee xirfada kubada cagta ku shaqeesta sida ciyaar yahanada kale. laakiin sida aad hada wax ku wadaan waxa loo arki karaa in taageerayaal messi aad tihiin sababtoo ah shaqsi caadi ah midan ma soo dhigi karo
kkkkk rag muxubo hadlay uun iga dheh
Dr Guled says:
FAALADAAN QOFKA DIYAARIYAY WUXUU/WAXEY U MUUQATAA INUU TAAGEERAYO MESSI,maxaa yeelay si aan wax loo qiimeyn micnaha ka lumineysa TAYADA WARGEYSKA LAACIB ayuu wax u qiimeeyay. fadlan ka fiirsada qoraalada aad qoreysaan haddii kale waxaa dhici doonta in shaqada la idinka eryo ama laacib gabigiisba lala wareego
Omar Sollas says:
Markay Dhintaan Ayaala la Kala Saarayaa Lkn ciyaartaydan Hadalkooda
dhamaan wxy Respect siinaya Ronaldo Oo Qaarkood
hada ayla ciyaaaraan haday dhahaan Messi ayaa fiican
Way iska cadahay In Messi Mar Walba Fiicanyahay
mucujisada Dunida Kubada Cagtu Waa Messi
wxaana Runa Hadalka PIQUE “Aniga Ahaan Messi
bini Aadam ilama Aha Lkn Ronaldo ayaa ugu Fiican
Abwaaan khadar qawdhan says:
waaa nasiib daro markaad doonaysaan in aad laba buurood aad isgrab dhigtaan waa inaad cadaalad wax ku qaybisaan kkkkk adigoo taageere u ah messi miyaa doonaysaa inaad bulshada wax u soo bandhigto waa ceeb taasi sxb kkkkk Messi waa ciyaaryahan fiican oo cid waliba ogtahay taas lkn libaaxu waa CR7 waaayo isagoo ka wayn messi hadana wuu ka ficil badan yahay waaayo lyon waad ogayd inta uu dadaal sameeyay lkn messi 8-2 ayuuna wax ficil ah u samayn barc oo uu dhibta ku daawanaayay naadiga uu 10 u xidho
Tevez ayaa dooda labada xiddig ka yiri: “Cristiano Ronaldo waa nin ku waalan inuu noqdo qofka ugu fiican wax walba. Messi wuxuu ciyaaraa isboorti kale. Inuu seddex gool dhaliyo kulan walba wax caadi ah ayay la tahay” 🤣🤣🤣🤣 lkn wxd ogaataa ciyaartoyda qaar ee dhahaya labaduba wey fiican yihiin waa beentood ee wxey taageersan yihiin messi qof walbana wuu og yahay in uu messi laacib san yahay
Xasan Xasan says:
Kkkkkk aniga axantaydada wahey ilaa tahay inay ku yiihii mucarad cr7 wayo xidigah dhan aya ku leyiihin messi aya fiican waayo argantiinays dhamantodoba marka dadka ku walan Messi waad qasartey dhex kkkk waa kaan dunida ugu fiican waa Saaruug madeera buum ✌🤘🤘🤘🤘🤘
Waa yaab maxaa yelay ronaldo iyo messi laba qof oo isku mida maahan runtii ee waa kala duwanyihiin messi wax lamida majiro ronaldo isagu waa laacib